"Aza manahy na inona na inona ; fa aoka ny fivavahana ... no hoentinareo manambara ny fangatahanareo amin’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra." Filipiana 4:6
"… ny mpianatra dia talanjona indrindra… Ary Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe: Tsy hain’ny olona izany, fa hain’Andriamanitra ny zavatra rehetra. " Matio 19:25,26
Raha nitsidika fianakaviana iray ny evanjelista E. Dapozzo dia nanatrika izao trangan-javatra kely izao. Iny niomana ho any an-tsekoly inyi Martin no tata-jaitra ny patalohany. Io ihany no mba patalohany azo raisina… Tsy afaka handeha amin’izao izy! Voatery niandry ny reniny nanjaitra ilay pataloha izy, ary nitebiteby fatratra hoe ho tara. Dia nitodika tany amin’ilay evanjelista izy ka nitalaho hoe: “Tsy mba afaka mivavaka ve ianao mba tsy ho tara aho?”
Amin’ny valo ora ny fidirana. Efa ho amin’ny valo ora anefa tamin’izay! Tokony ho efa any an-tsekoly i Martin. Tsy toy ny mangataka zavatra tsy azo tanterahina ve ny mivavaka mba tsy ho tara?
Nambaran’i Dapozzo tam-pahatsorana tamin’Andriamanitra nefa ny fangatahan’i Martin. Rehefa ela ny ela ka vonona ilay zaza, dia efa tamin’ny valo ora sy fahefany ny andro. Mandra-pahatonga any an-tsekoly dia mbola hisy minitra vitsivitsy koa…
Faly dia falyi Martin ny antoandro. Hoy izy mitantara: “Nadinon’ny mpampianatra ny lakileny anikeheo maraina. Tsy nanomboka ny fianarana raha tsy tamin’ny valo sy sasany”.
Valiny mahafinaritra re izany, azon’ilay vavaka tsotra, tao anaty trangan-javatra tsy nisy nantenaina intsony! Isika ve ho sahy nivavaka tam-pahatsorana toy izany?
Mazava ho azy, tsy maintsy amin’ny fieritreretana malalaka sy fo mahitsy no anaovana izany. Fa afaka manao ny zavatra rehetra Ilay Andriamanitra nampiverina ny aloka teo amin’ny famantarana ora, fahiny, ho valin’ny vavak’i Hezekia mpanjaka (2 Mpanjaka 20:5-11). Ary mahafinaritra Azy ny mamaly ny finoana.
Aoka ny zavatra niseho tamin’i Martin hampirisika antsika hanambara amin’Andriamanitra ny fangatahantsika, na inona na inona mitranga!